पूर्वनिर्धारितबाट, LibreOffice शव्दहरू चलाउँदछ जुन अर्को पङ्क्तिको पङ्क्तिमा मिल्दैन. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, यो व्यबहार खारेज गर्न तपाईँ स्वचालित वा म्यानुअल योजक चिन्ह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
स्वचालित हाइफनेसनले हाइफन घुसाउँदछ जहाँ तिनीहरू अनुच्छेका लागि आवश्यक हुन्छ । यो विकल्प मात्र अनुच्छेद शैलीहरू र व्यक्तिगत अनुच्छेदहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ.
अनुच्छेदमा स्वत: पाठ योजक चिन्ह राख्दै
दायाँ-क्लिक अनुच्छेदमा, र अनुच्छेदरोज्नुहोस् .
पाठ प्रवाह ट्याब क्लिक गर्नुहोस् .
हाइफेनेशन क्षेत्रमा, स्वचालित रूपमा चेक बक्स चयन गर्नुहोस्।
बहु अनुच्छेदहरूमा पाठ स्वचालित तरीकाले योजक चिन्हित गराउन:
यदि तपाईँ स्वचालित रूपमा एक भन्दा बढी अनुच्छेद योजक चिन्ह राख्न चाहनुहुन्छ भने, अनुच्छेद शैली प्रयोग गर्नुहोस्.
उदाहरणका लागि, स्वचालित योजक चिन्ह विकल्प सक्षम पार्नुहोस् "पूर्वनिर्धारित" अनुच्छेद शैलीका लागि, र अनुच्छेदहरूमा शैली लागू गर्नुहोस् जुन तपाईँ योजक चिन्ह राख्न चाहनुहुन्छ.
अनुच्छेद शैलीमा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँ योजक चिन्ह राख्न चाहनुहुन्छ, र परिमार्जन रोज्नुहोस्.
पाठ प्रवाह ट्याब क्लिक गर्नुहोस्।
योजक चिन्ह क्षेत्रमा,स्वचालित जाँच बाकस चयन गर्नुहोस्.
तपाईँले योजक चिन्ह राख्न चाहनु भएको अनुच्छेदहरूमा शैली लागू गर्नुहोस्.
म्यानुअल योजक चिन्ह
तपाईँ योजक चिन्ह घुसाउन सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँ पङ्क्ति चाहनुहुन्छ, वा LibreOffice योजक चिन्हका लागि शव्दहरूको खोजी गर्नुहोस्, र सुझाव गरिएको योजक चिन्ह प्रस्ताव गर्नुहोस्.
द्रुत रूपमा योजक चिन्ह घुसाउनका लागि, शव्दमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ योजक चिन्ह थप गर्न चाहनुहुन्छ, र आदेश Ctrl+योजक चिन्ह (-) थिच्नुहोस्.
यदि तपाईँले म्यानुअल योजक चिन्ह शव्दमा घुसाउनु भयो भने, शव्द मात्र म्यानुअल योजक चिन्ह मा योजक चिन्ह हुन्छ. कुनै थप स्वचालित योजक चिन्ह यो शव्दका लागि लागू गरिएन. म्यानुअल योजक चिन्ह संगको शव्द योजक चिन्ह हुन्छ छायाकरण सँग सम्बन्धित नभएर नै पाठ प्रवाह ट्याब पृष्ठमा.
चयनमा म्यानुअल तरीकाले पाठ योजक चिन्ह राख्न:
पाठ चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ योजक चिन्ह राख्न चाहनुहुन्छ.
उपकरणहरू - भाषा - हाइफनेसन रोज्नुहोस् ।
पूर्वनिर्धारित टेम्प्लेट परिवर्तन
Title is: योजक चिन्ह